Light makeup tips - ArtistNepal academy
ArtistNepal Academy • Fashion News • Lifestyle • news
हल्का मेकअपले तपाईंको रूप परिवर्तन गर्न सक्छ, यी ६ चरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्!
कहिलेकाहिँ ट्रेन्डिंग मेकअप पनि छान्नु पर्छ। आजकल, हल्का वा न्युड मेकअप धेरैजसो महिलाहरूको छनौट रहन्छ।उनीहरुको विश्वास छ कि यसले धेरै आकर्षक बनाउँछ। यद्यपि, सही प्रकारको मेकअप किट प्राप्त गर्नु सबैका लागि सजिलो हुँदैन। तसर्थ धेरै महिला को प्रश्न रहन्छ कि हल्का मेकअप कसरी गर्ने? वा तपाइँ कसरी कम मेकअपसंग आकर्षक देख्न सक्नुहुन्छ।
हल्का मेकअप गर्नु धेरै गाह्रो छैन र धेरै समय पनि लाग्दैन । हल्का मेकअप गरेर, तपाईं अफिस, पार्टी वा किनमेलको अलावा धेरै अन्य ठाउँहरूमा जान सक्नुहुन्छ। साधारण मेकअपले तपाईंको लुकको लागि चमत्कार गर्न सक्छ। विज्ञहरू भन्छन् कि मेकअप एक कला हो जुन सबैले मास्टर गर्न सक्दैन। यदि तपाईंलाई मेकअपको केही आधारभूत कुरा थाहा छ भने, त्यसोभए समयको बर्बाद नगरीकन उत्कृस्ट मेकअप गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
आज हामी तपाईंलाई लाईट मेकअका केहि चरणहरू बताउन जाँदैछौं, जुन तपाईंले सजिलै दैनिक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
१. मोइस्चराइजर र सनस्क्रीन
मेकअप गर्नु अघि, आफ्नो अनुहारमा मॉइश्चराइजर लगाउनुहोस्। यसले तपाईंको अनुहारमा श्रृंगारको सही रूप प्रदान गर्दछ। तपाईंको छाला नरम र चमकदार बनाउँदछ। मॉइश्चराइजर लगाउनु अघि, पहिले अनुहार सफा गर्नुहोस्। त्यस पछि मात्र मेकअपको अर्को चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्।
२ सहि बेस छान्नुहोस्
यसको लागि तपाईं लाइट फाउन्डेशन, सीसी वा बीबीसी क्रीम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आजकल बजारमा त्यस्ता धेरै क्रीमहरू उपलब्ध छन्, जुन प्रयोगमा धेरै प्राकृतिक देखिन्छ। तपाईं यसलाई आफ्नो अनुहारमा ब्यूटी ब्लेन्डरको सहायताले लागू गर्न सक्नुहुनेछ।
३ कन्सेलर र प्राइमर प्रयोग गर्नुहोस्
गाढा सर्कल, blemishes वा अनुहार मा pimples प्राइमर र कन्सीलर लागू गरेर लुकाउन सकिन्छ। कन्सिलर र प्राइमर लाई तपाईंको छालाको टोन भन्दा हल्का लिनुहोस्। यदि तपाईं कुनै ठाउँमा जानुहुन्छ जहाँ तपाईंलाई लामो समय बस्नुपर्दछ भने ती दुबै प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ।
४ कम्प्याक्ट र ब्लस
लाईट मेकअपको लागि अनुहार टोनको कम्प्याक्ट लागू गर्न पनि आवश्यक छ। यसको प्रयोग गरेर तपाईंको अनुहार प्राकृतिक देखिन्छ। यस बाहेक, यदि तपाईं ब्लस लागू गर्न चाहानुहुन्छ, भने धेरै चम्किलो वा गाढा र ब्लश प्रयोग नगर्नुहोस्। यस बाहेक तपाईले यसलाई घाँटी, निधार र नाकको नाकमा हल्का रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
५ आँखाको लाईट मेकअप
आँखा मेकअपको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरण मानिन्छ। आईसेडो, आई लाइनर र गाजल लगाउँदा आँखाको सुन्दरता बढ्छ। आजकल सजिलैसँग बजार वा अनलाइनमा न्युड रंगको शेडहरू पाउन सक्नुहुन्छ। उही समयमा, आई लाइनर अलि पातलो लगाउनुहोस्। यसले तपाईंको आँखा धेरै आकर्षक देखिन्छ। यस पछि पातलो काजल आँखामा पनि लगाउनुहोस्। मस्करा प्रयोग नगर्नुहोस्, यो लाईटको सट्टामा भारी देखिन्छ।
लाईट मेकअपको बखत, गाढा रंगको लिपस्टिक लगाउनुको सट्टा हल्का या न्युड लिपस्टिक प्रयोग गर्नुहोस्। यसले तपाईंको अनुहार धेरै राम्रो देखिनेछ। यदि तपाई लिपस्टिक लगाउन मनपराउँनुहुन्न भने लिप ग्लोस पनि लगाउन सक्नुहुन्छ।
गायक अभय ढुङ्गेल र रेश्मा सुनुवारको मार्यो मार्यो सार्बजनिक (भिडियो)
मोडलिङ्ग पोर्टफोलियो के हो ? र यसको प्रयोग कसरी हुन्छ...